Muddeen 1 guyyaa AIDS addunyaa
Muddeen 1 guyyaa AIDS addunyaa guyyaa AIDS ilaalchisee hubannoo jiru ol kaasuu akkasumas dhibee kanaan lammiiwwan lubbuu dhabaniif guyyaa gadda itti ibsani. Qabiyyeen waggaa kanaa “Weerara HIV AIDS dhabamsiisuu, dura dhaabbachuu fi dhiibbaa isaa” ka jedhu.
Galma misoomaa mileeniyemii tokkummaan mootummootaa bara 2000 keessa lafa kaa’e waliin guyyaan AIDS addunyaa kabaajamuun hubannoo sadarkaa addunyaa fi namoota harka qalleeyyii vaayiresichi dhiiga isaanii keessa jiruuf deggerssa godhamu babal’isuuf yaalii godhamu gumaacha guddaa qabaateera. Bara 2003 keessa bulchiinsi prezidaantii Ameerikaa duraanii kan Joorj W Bush karoora prezidaantii kan yeroo hatattamaa dandammachiisa AIDSf jedhu hundeessee jira. Sadarkaa addunyaatti dhibee tokkotti duuluuf biyya kamiinuu caalaa cicha guddaa argamee fi deggersa paartii lamaanuu kan argate ture.
Har’a uummata miliyoona 38tu HIV AIDS waliin jiraata. Kanneen keessaa ga’eessonni dhibba irraa harki 68 hanga Waxabajjii bara 2020 dawaa lubbuu dheeressuu fudhataniiru. Kun lakkoobsa guddaa fakkaatus bara 2004 keessa lakkoobsi namoota AIDS dhaan du’anii dhibba irraa harka 60n kan gad cabe akkasumas namni haaraa vaayiresichaan qabamu erga bara 1997 qabee dhibba irraa harka 40n gad cabuu jarmayaan dhimma AIDS kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira.
Milkaa’inni irra hedduun karaa sagantaa gargaarsaa mootummaa Ameerikaa PEPFAR kan argame yoo ta’u, erga hundeeffamee waggoota 18 qabee lubbuu uummata miliyoona 20 du’a kan oolche yoo ta’u miliyoonaan kan laka’aman immoo vaayiresicha akka of irraa ittisan gargaaree jira. Kan biyyoota 50 ol ta’an keessaa hojjetaa jiru PEPFAR, biyyoonni michoota ta’an weerara vaayiresichaa to’achuuf tattaafatan bakka jeeqamni jiru nagaan akka bu’u gargaaree jira.
Waggaa kana hanga Fulbaana 30tti PEPFAR uummata miliyoona 17.2 dawaa lbbuu dheeressu akka argatan kan gargaare yoo ta’u daa’imman miliyoonni 2.8 haadholii vaayiresiin HIV dhiiga isaanii keessa jiru irraa dhalatan vaayiresicha irraa walaba akka dhalatan gargaaree jira. Kanneen miliyoona 6.7 ta’anii fi maatiin irraa du’anii fi kanneen kunuunsa godhaniifis deggersa barbaachisu dhiyeessee jira.
Waggaa kana COVID-19 HIV/AIDSf deebii sadarkaa addunyaa godhamutti gufuu ta’ee jira. Haa ta’u malee biyyoonni michoota ta’an keellaalee PEPFARn deggeraman, laboraatooriiwwan fi caasaa dhiyeessii meeshaalee gargaarsaa-tti gargaaramuu dhaan duula COVID -19 ittisuuf godhamu cimsuu akkasumas deebii HIV/AIDS ittisuuf ta’u boodatti akka hin hafne gargaaraniiru.
Hoogganni Ameerikaa sadarkaa addunyaatti HIV/AIDS tti duuluu ilaalchisee karaa sagantaa deggersa yeroo hatattamaa kan prezidaantiin akkuma cimetti jira jechuu dhaan prezidaan Donaald Tramp dubbataniiru.
Tattaaffiin kunis weerarri HIV/AIDS balaa uumuu irraa hawaasa keessatti gara to’atamuutti akka ce’u godheera jechuu dhaan gulaalaan har’aa yaada isaa xumura.